A isamba isiqondiso
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ A isamba isiqondiso
Kodwa kuyinto uhlelo ukuthi isamba iziqondiso futhi wawusetshenziswa amaphephandaba kanye izindaba esikhashaneni esedlule, kuze kube manje abantu ababengenawo onqenqemeni ezikweletini, kungaba abantu abaningi ukuthi emhlabeni awazi ukuthi yini ukusebenza kwezikole zokusoka.
Lesi sikhathi, ngoba isamba isiqondiso, thina uyokwethula inkulumo ngemuva ukuthi baba ithuba ukucacisa okuqukethwe kwalo.
Kuyini Imininingwane ukulawula isamba?
isamba imigomo, lapho ubhalisele ebolekiwe, kweleti is umthetho ukuthi ichaza ukuthi kuphela kuze kube okukodwa kokuthathu imali yonyaka ngeke ukuboleka imali. I
Ngokucacile, ngemva ukuphoqelelwa esimweni abasebenzi ezikhokhelwayo eyinzuzo 3.6 million, ngeke akwazi ukuboleka yen kuphela ezingu 1.2.
Lona, ngisho noma into efanayo mina ubhaliselwe inkampani engaphezu kweyodwa, ngeke bakwazi ukwenza izikweletu angaphezu kwezigidi ezingu-120.
Ngaphezu kwalokho, lapho isicelo ukuboleka entsha e ezezimali umthengi, kuyinto isamba isiqondiso kanyekanye futhi ukuhanjiswa isitifiketi engenayo ngaphezu luhlolo evamile eyayidingeka.
Lawa ngaphezu ezezimali umthengi, futhi inkampani credit noma credit card inkampani, ngithanda ukusho ukuthi ngendlela eyisimanga umthetho ajwayelekile ngoba into ukuze zisetshenziswe. isizinda
Inani isiqondiso wazalwa
Inani isiqondiso wazalwa, ihlobene lowo muntu ukuba enze a self-ucabanga liye lenyuka. Phakathi inani lenzalo, ngokuthi empunga zone
ukuphoqelelwa edlule, wakwazi ukukwenza yi ezezimali umthengi onokuqonda uma kukhona ethile yemali engenayo, iyiphi inombolo wokuboleka.
Ngenxa yalokho, lithi umuntu wakhathazeka uxhaso ekuphenduleni komnotho ngowezi-enyakazayo landa inani amacala usebenzisa ezezimali umthengi.
Nokho, ukubuyiswa kwemali plan umuntu waboleka Mamanarazu, yalokho ukuthi kwadingeka izikweletu bayanda ngokushesha Snowball, yebo liphinde abaningana ukuthi ukuphila kuba Mamanaranaku.
kusukela ngalo mkhuba omusha, nge okweletayo ukwenza self-ucabanga liye landa, abaningi ezezimali umthengi kanye Machikin ukuphathwa isibe eqinile.
yalokho, Machikin ezifana iye sisekelwe esifundeni, ayinayo okungenani lapho yokutakula usephendukele yimali Mamanarazu.
Ngamanye amazwi, ngisho nekhono art futhi lent abantu waboleka, sobabili ku isimo umthetho isibe kunalokho Yuka elitholakala kahle.
Ngakho-ke, manje uhulumeni ukuhlinzeka omunye umugqa ngesimo Imininingwane ukulawula isamba.
njengoba ohlangothini yomsebenzisi, kodwa ungase uzizwe esingesihle ingxenye asikwazi ukwenziwa is zokweboleka kuphela kuze ethile imali, ngakolunye uhlangothi neze into uhulumeni okubi kithi ukumisa ngaphambi abese engena esikweletini isihogo Xiang.
Ngaphandle Inani isiqondiso
Ngale ndlela, isamba mthethonqubo umthetho ukuthi kubalulekile ngoba ukusekela ngazinye oyedwa bangathola lilinganiselwe.
Nokho, kukhona icala lapho lo mthethonqubo ngaphandle.
kunangabangamashumi ejwayelekile, ezifana mortgages and loans auto, ngenkathi yezitolo ezinkulu kakhulu, kodwa lawo ubuhlobo obuseduze ekuphileni.
futhi, ukuze lezo njengenkondlo ebonisa ngaphandle endaweni isamba imigomo, futhi zihlanganisa abolekise kwezimali zebhizinisi.
Lokhu akusho umboleke njengoba izindleko ophilayo, kuhloswe ukuba athathe isimo uboleka abanikazi bamabhizinisi izimali zebhizinisi. Ukuze
get sivunyiwe, ngoba idinga ngokuyisisekelo ukuhanjiswa isitifiketi engenayo, ngesikhathi isicelo kumelwe sengilungisile entela kanye nesitifiketi lokukhokha intela.
Ngaphezu kwalokho, eboleka ngokomthetho, amabhange kanye ngesikweletu nezinyunyana azihlanganisiwe isamba isiqondiso.
kuqhathaniswa ne ezezimali umthengi, nakuba isibalo Ukuhlola izinsuku kuthatha kusimo esinjalo siyisivikelo, ngithanda ukusho ukuthi kukhona ukuzama uzikhethele wena uma usufuna ukuba aboleke imali ethile.
Yiqiniso, angahlelekile Lokhu akusho imali angenamkhawulo kubolekwe.
ngokukhethekile, kuyinto endabeni zabantu abaye bagcina izikweletu ngezinga elithile, ngoba luhlolo kube kubi nakakhulu, kukhona amacala amaningi okungakwazi ukuboleka yalokho.
ezihlobene / imali lathathwa
ebhange ezihlobene / ukuqasha "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html"> imali ebhange
Inani mthethonqubo isamba isikweletu Umlayo kwachazwa ngokuthi ingxenye eyodwa kwezintathu imali wonyaka mkhawulo.
Ngaphezu kwalokho, kuye ngokuthi lemali ebolekiwe Kukhona amalungiselelo, ezifana ezidinga isitifiketi engenayo.
ivolumu Imininingwane ukulawula ikakhulukazi isicelo ezifana ezezimali umthengi kanye namakhadi okuthenga ngesikweletu, futhi izimali zebhizinisi lobunini yedwa, kuyoba ekhululiwe maqondana zokweboleka ebhange.
Lena esiyishoyo esikisela eqinile ukuthi ngokubona amabhange namabhizinisi ziye uzibophezele, it is hhayi nganoma iyiphi indlela ukuthi etsheleka angenamkhawulo nemali.
zokugcina, njengoba kucatshangwa ukuthi ukuboleka imali ku senkokhelo kungenzeka uhla yayo, kubalulekile ngobuqotho izikweletu izocatshangelwa ngokucophelela.